Wararka Dibada | Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan | Page 20
Turkistaanta bari, waa dhul ballaaran oo ay ku noolyihiin malaayiin ruux oo muslimiin ah, oo asal ahaan kasoo jeedaan qomwiyada Turkida. Wuxuu dhulkan Islaamku gaaray waaya fog, hogaamiyihii mujaahidka ahaa ee Quteyba bin Muslim Al-baahili ayaa magaalada Kashqar ee caasimadda Turkistaanta bari wuxuu furtay sanadkii 96-aad ee hijriyada. Mid kamid ah boqoradii ka talin jiray dhulka Turkistaanta bari, oo lagu ...	Read More »
Malleeshiyaadka Nidaamka Nuseyriyada oo duqeymo ka geystay gobolka Idlib.
Qeybo kamid ah gobolka Idlib oo dhaca wuqooyiga Suuriya waxaa habeenkii xalay ka dhacay duqeymo ay geysteen malleeshiyaadka nidaamka Nuseyriyada ee uu hogaamiyo Bashaar Al-asad. Duqeymahan oo ay Nuseyriyadu u adeegsadeen hubka cul culus ee madaafiicda ayaa si gaar ah waxay u beegsadeen magaalada Jarjanaar ee gobolka Idlib, oo kamid ah magaalooyinka ay ku noolyihiin dadka muslimiinta ah. Madaafiic kusoo ...	Read More »
Sawirro: Kumanaan Neef Oo Sako ah Oo Laga Qeybiyay Shabeellaha-Hoose.
Wilaayada islaamiga ee Shabeellaha hoose waxaa dhawaan kusoo gebegeboobay qeybinta Sakada xoolaha nool. Deegaannada hoosyimaada degmada Baraawe ee wilaayada islaamiga ee Shabeellaha hoose waxaa laga qeybiyay kumanaan Neef oo isugu jira Ari, geel iyo Lo’. Maktabka Zakawaadka ee wilaayada islaamiga ee Shabeellaha hoose ayaa deegaanno dhowr ah oo hoos yimaada Baraawe wuxuu ka qeybiyay 2404 Neef oo isugu jira Ari, ...	Read More »
Barnaamijka Dhacdooyinka Dunida Islaamka 15-03-1440
Barnaamijka Dhacdooyinka dunida islaamka waa todobaadle maanta oo kale ka baxa warbaahinta islaamiga ah ee Al-furqaan laguna soo qaato akhbaaraadkii ugu waaweynaa caalamka. Halkan ka dhagayso Barnaamijka Dhacdooyinka Dunida Islaamka 23-11-2018 Halkan ka dhagayso Barnaamijka Dhacdooyinka Dunida Islaamka 23-11-2018.lite Read More »
Maraykanka oo haween iyo caruur badan ku dilay dalka Afghanistaan.
Musal-salka beegsashada dumarka iyo caruurta ayaa joogta ka ah dalka Afghanistan, dowladda Maraykanka oo sheegata xuquuqda iyo ilbaxnimada ayaana ah dowladda ka dambeysa gumaadkan wuxuushnimo ee ka socoda Afghanistaan. Diyaarad drones ah oo ay leedahay dowladda Maraykanka ayaa gobolka Laqmaan ee Afqaanistaan waxay ku dishay ugu yaraan saddex dumar ah, oo ku sugnaa qeybo kamid ah gobolka. Wararka ka imaanaya ...	Read More »
Dagaallo xoogan oo dib uga qarxay magaalada Al-xudeyda ee wadanka Yaman.
Waxaa dib markale magaalada Al-Xudeyda ee galbeedka wadanka Yaman ka billowday dagaallo xoogan oo dhexmaraya ciidamada xukuumadda taagta daran ee Cabdi-rabbi iyo malleeshiyaadka shiicada ah ee Xuuthiyiinta. Dagaallada ayaa billowday saqdii dhexe ee xalay, waxaana diyaaradaha isbaheysiga uu hogaamiyo Aala-sucuud ay magaalada ka fuliyeen duqeymo dhowr ah oo la sheegay in lagu garaacay difaacyada ay ku suganyihin malleeshiyaadka Xuuthiyiinta. Saraakiil ...	Read More »
Afghanistan: Duqeyn lagu garaacay Xaflad Aroos iyo Musharrax Qarax lagu beegsaday.
Waxaa sii socda gabood fallada iyo xasuuqa arxan darrada ah ee ay ku kacayaan ciidamada Shisheeyaha iyo kuwa uu tababaray ee malleeshiyaadka xukuumadda Kaabul, kana geysanayaan wadanka muslimka ah ee Afqaanistaan. Ciidamada xukuumadda Kaabul ayaa duqeyn madaafiic oo ay ku garaaceen degmada Jalriiz ee wilaayada Meydaan-wardak waxaa ka dhashay dhimashada caruuska, iyo labo ruux oo kamid ah dadka lagu casuumey ...	Read More »
Sawirro: Wilaayada Islaamiga ee Hiiraan Oo si wanaagsan Looga qeybinayo Zakada Xoolaha Nool.
Waxaa si wanaagsan wilaayada islaamiga Hiiraan uga socda qeybinta Zakada xoolaha nool, ee la siinayo dadka muteystay ee Allaah uu sheegay. Deegaannada dhaca bariga iyo galbeedka wilaayada islaamiga Hiiraan ayaa laga qeybiyay xoolo gaaraya 2600 oo neef, oo isugu jira ari iyo geel, waxaana qoysaska qaatay Zakadan ay gaarayaan ugu 560 qoys. Sodon kamid ah qoysaskaas waxaa la siiyay min ...	Read More »
Zakada Xoolaha Nool Oo laga Qeybiyay Wilaayada Galgaduud.(Sawirro)
Maktabka diiwaanta Sakawaadka ee wilaayada islaamiga ee Galgaduud ayaa wilaayada ka qeybiyay sakada xoolaha nool, taas oo la siiyay dadka muslimiinta ee muteystay. 2067 Neef oo ari ah ayaa laga qeybiyay maalintii shalay gobolka, kuwaas oo loo kala qeybiyay ugu yaraan 300 oo qoys. Qof weliba waxaa wax lagu siinayay hadba baahidiisa gaarka ah, waxaana dadka qaatay ka muuqatay farxad ...	Read More »
Dhaalibaan Oo fashilisay Howlgal Soo degitaan ah oo ay fuliyeen Ciidamo Ameericaan ah.
Ciidamo katirsan kuwa Ameericaanka oo ay wehliyaan kuwa kumaandooska xukuumadda Kaabul ayaa weerar kusoo qaaday fariisin ay ku sugnaayeen ciidamo katirsan Imaarada islaamiga ee Kaabul. Weerarkan oo ka dhacay qeybo kamid ah gobolka Nangahaar, waxaa si adag uga hortagay ciidamada Imaarada islaamiga, kuwaas oo sida muuqatay ka war hayay dhaq-dhaqaaqa ay damacsanaayeen ciidamada Maraykanka iyo kuwa xukuumadda Kaabul. Afhayeenka Imaarada ...	Read More »